MDC Inokwidza kuHurumende Kushungurudzwa kweVanhu paBumbiro reMitemo
Bato reMDC inotungamirirwa naVamorgan Tsvangirai rinoti nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu muchirongwa chekunzwa pfungwa dzavanhu pane zvinofanirwa kunge zviri mubumbiro idzva remitemo yenyika, dzakwira, zvikuru mumatunhu eMashonaland Central, Masvingo pamwe neManicaland.
Gwaro raburitswa nebato iri rinoti nhengo dzaro mumatunhu aya dziri kusungwa uye kutyisidzirwa nevatsigiri veZanu PF pamwe nevasori, avo vanonzi vari kumanikidza vanhu kuti vatsigire zviri muKariba Draft.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti vasvitsa nyaya iyi kuvatungamiri vemapato ari muhurumende.
Zvichakadaro, zvinhu zvinonzi hazvisi kufamba sezviri kutarisirwa mudunhu reMashonaland Central.
Vari kuongorora hurongwa uhu vakazvimirira vega, Amai Tadziripira Khumalo, vanoti mukomana ane makore gumi nematanhatu avanga vatuma kuMvurwi kuti asvitse magwaro avari kupa veruzhinji kuti vazive zviri kukurukurwa panenge pauya nhengo dzeCOPAC, abatwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF uye havasati vaziva kuti aripi.
Amai Tadziripira vanoti mapurisa ekuMvurwi avaudza kuti haana motokari yekuti akwanise kutsvaga mukomana uyu. Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa.
Asi Amai Tadziripira vaudza Studio7 kuti vatsvitsa nyaya iyi kuJOMIC pamwe nekune rimwe gurukota rezvemukati menyika, Amai Theresa Makone, kuti vabatsirwe kuwana mukomana uyu.
Hurukuro naAmai Tadziripira Khumalo